Ungayibhala kanjani i-imeyili evulekile futhi ifundwe | Database lakamuva Lokuposa
Ungayibhala kanjani i-imeyili evulekile futhi ifundwe
Ikhaya » I-imeyili Database Blogs » imeyili Marketing » Ungayibhala kanjani i-imeyili evulekile futhi ifundwe
February 18, 2019 in imeyili Marketing Umakwe Thenga uhlu lokuxhumana nge-imeyili / thenga uhlu lokuthengisa nge-imeyili / thenga uhlu lokuthengisa nge-imeyili / uhlu lokuthenga / uhlu lwama-imeyili by mijanbokul
Kulungile, usunalo isu lokumaketha le-imeyili elichaziwe futhi uphephile ekubhekisweni njenge-spammer.
Manje kuza okunzima kakhulu: thola obhalisile wakho ukuthi achofoze ku-imeyili yakho futhi ayifunde .
Ungacabangi ukuthi ngoba ubhalisile kubhulogi lakho uzovula wonke ama-imeyili akho. Ngabe ucabanga ukuthi uyisizinda somhlaba? Okuhle kakhulu ukuthi ngemuva kwehora awukhumbuli nokuthi ubhalisile kubhulogi lakho. Futhi vele awuyena kuphela ibhulogi obhalise kulo.
Zicabange: Bangaki amabhulogi noma izincwadi zezindaba obhalise nazo?
Phindaphindeka leyo nombolo nge-2 futhi uzosondela kunombolo yangempela.
Futhi lokhu kusiholela eqinisweni lokuthi ibhokisi lokungenayo liyimpi ngaphandle kwekota. I-imeyili yakho kufanele ilwe nawo wonke amanye ama-imeyili ngoba yiwona obiza ukunakwa futhi uvulekile.
Ngoba i-imeyili engavuli i-imeyili eya ngqo kudoti. Kuyacaca?
Ake sibheke ukuthi yiziphi izikhali zakho kule mpi.
Lapho uthola i-imeyili ubona kuphela izinkambu ze-2:
Lowo ngumthelela wokuqala owutholakala ku-imeyili yakho nomehluko phakathi kokuvulwa noma ukuya kudoti.
Ngomthumeli kubaluleke kakhulu ukuthi abantu babone othumele umlayezo. Uma bengakuhloniphi, ngingakuqinisekisa ukuthi i-imeyili yakho i-KO eqondile.
Musa ukusebenzisa amagama enkampani noma isizinda sebhulogi yakho uma kungeyona igama lakho. Kubalulekile ukuthi ubeke igama lakho lokuqala nelokugcina noma, okungenani, igama lakho. Uma ungabeka igama elijwayelekile kakhulu ungabeka izinto ze-2. Ezinye izibonelo:
UFranck Scipion kusuka ku-Lifestyle kuya ku-Square
I-2. Isihloko: "I-WIIFM - Inani Kimi? (Yini lapha kimi?) "
Futhi sifika kulolu daba.
Uma silinganisa impumelelo yomkhankaso wokumaketha nge-imeyili ngezinga lokuvula, ngiyakuqinisekisa I-90% yemiphumela izoncika kulokho okufake kulo mkhakha . Kulokhu, ubhekene nenkinga efanayo engaba nayo ngezihloko zamathikithi akho.
Ngikunika imibono yezindaba zakho ezizothuthukisa isilinganiso sakho sokuvula:
Kumele kuthakazelise futhi kube-sexy ngandlela thile.
Kufanele igwebe futhi ivuse ilukuluku lokufuna ukwazi.
Inzuzo yokuvula leyo imeyili kufanele iqondwe. Kepha qaphela, ungenzi izethembiso ongeke uzifeze, uzibeka engcupheni yokujeziswa ngumbhalisile ozizwa ukuthi uqanjiwe.
← Izinhlu Zokungena Kokubili
Ungakhula kanjani ngokushesha inani lababhalisile ohlwini lwakho lwamakheli →